Iifutshane ezimfutshane zokubhala ngo-Amy Harrison | Martech Zone
NgeCawa, ngoFebruwari 17, 2013 NgoMvulo, Juni 8, 2015 Douglas Karr
Amy Harrison, umbhali wekopi osomashishini nabaqeqeshi, ubonakalisiwe kwezona blog zibalaseleyo zokukhuphela kwi-net. U-Amy ukhuphe i-ebook ye-17 yeedola ebhekisa kwamanye amabinzana awathandayo kunye namagama kunye namanye amagama kunye namabinzana awabona uninzi lwebhlogi kunye nokukhuphela ukubhala iingxilimbela zisebenzisa.
Isikhokelo esimfutshane sokuBhala siBandakanya:
Iindlela ezingama-30 kwisihloko esingumbulali - Apha ufumana iitemplate ezingama-30 (kunye neengcebiso zamagama ekufuneka uwasebenzisile ukuzalisa iindawo ezingenanto) ukuze uze nesihloko seshishini lakho okanye kwibhlog yakho exelela abathengi bakho ngento oyenzayo (kwaye kutheni kufuneka baqhubeke nokufunda ) kwimizuzwana.
104 Amabinzana okuyigcina incoko -Uyayazi indlela abanye ababhali abalawula ngayo ukugcina ithoni yokuncokola ngokungaqhelekanga ukuze uzive ngathi unxibelelana nomntu uqobo kunokuba ufunde imiyalelo kwi-DVD player yakho? Ewe nanga amagama ancokola kunye namabinzana anokukunceda wenze okufanayo.
Iindlela ezingama-54 zokusika umkhuhlane - Xa sidiniwe siqala ukuthetha "ngezinto" kunye "nezinto" kwaye onke "awundixeleli nantoni na ethe ngqo" amagama anokwenza ukubhala kwakho kulityalwe njengendawo oshiye kuyo izitshixo zemoto… Eli candelo ikubonisa indlela yokuthintela oku.
Amabinzana angama-75 okongeza iPOW! -Ukuzama ukugcina amandla wepeppy emva kokuba uyilo lwakho lwesi-3 lukhohlisile, kwaye kulula ukuba ungene kulwimi "olukhulu, olukhulu kakhulu, nolukhulu kakhulu" olunomdla njengemixholo yesaladi kwifriji yam. Sebenzisa la magama xa ufuna ukuvakala ngathi unawo onke amandla anomtsalane wenjana. (Isilumkiso- La ngamagama AMANDLA, ufuna kuphela ukufafaza ukukhanya ukuzisa ikopi yakho okanye iposti yebhlog ebomini!)
Iindlela ezingama-87 zokupeyinta iintlungu zomthengi wakho -Okukhona unokuchaza ngakumbi malunga neengxaki okanye imiba abajamelana nayo nabathengi bakho, kokukhona baya kuyamkela ngakumbi le nto uthi ungayenza ngayo. Babonise ngokucacileyo ukuba uyayiqonda kanye le nto bajongana nayo.
Amabinzana angama-80 okubabonisa indlela abaza kuziva ngayo -Emva kokupeyinta umfanekiso wentlungu yabo kuya kufuneka ubenakho ukuchaza indlela abaya kuziva ngayo ngokumangalisayo emva kokuba besayine ibhlog yakho, bathenga imveliso yakho okanye bakuqesha? Dipha kweli candelo xa ufuna ukucacisa zonke iziphumo ezintle abanokuzilindela ekusebenzeni nawe.
Iindlela ezingama-71 zokuvala isivumelwano -Ayinamsebenzi ukuba ufuna abaphulaphuli bakho baqhubeke nokufunda, okanye ubhalise kwincwadana yakho, okanye ujoyine iklabhu yakho yobulungu okanye uthenge i-eBook yakho kufuneka ubazise ukuba mabenze ntoni kwaye kutheni kufuneka bayenzile yiyo. La mabinzana akubonisa ukuba zingaphaya kwe-1 indlela yokwenza ukuba umthengi athathe inyathelo.
Amabinzana obuNtu ” - ibandakanyiwe licandelo apho unokurekhoda khona amabinzana obuntu bakho, okanye amanye amabinzana anokuthe ngqo kwimarike yakho ekujoliswe kuyo, kwingingqi kunye nayo nayiphi na enye into encinci ye-you-isms. Uya kumangaliswa ukuba zingaphela ngokulula njani izinto ozibhalayo ngaphandle kokuba uyazi malunga nokuzibandakanya.
Sebenzisa ikhonkco lethu lokudibana kwaye ubambe ikopi yale ncwadi imangalisayo namhlanje!
Iindlela ezimfutshane zokushicilela
tags: ikopiikopi yokubhalaIkopi yokufika kwephephaikopi ecengayounxibelelwano lokuthengisa